चीन Alkyd रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > तेल आधारित रंग > Alkyd रंग
Alkyd रंग निर्माताहरु
Alkyd रंग पनि alkyd राल रंग वा alkyd राल कोटिंग को रूप मा जानिन्छ। यो मुख्य रूप मा alkyd राल बाट बनेको छ र वर्तमान मा चीन मा उत्पादन रंग को सबैभन्दा ठूलो प्रकार हो।
Alkyd रंग को रंग फिल्म लचीला, घर्षण प्रतिरोधी छ, र राम्रो आसंजन छ; रंग फिलिम सुख्खा पछि, यो एक उच्च डिग्री नेटवर्क संरचना, जो उमेर को लागी सजिलो छैन, राम्रो मौसम प्रतिरोध र लामो समय सम्म चकाचौच बनाउँछ; खनिज तेल र अल्कोहल विलायक राम्रो प्रतिरोध। बेकिंग पछि, पानी प्रतिरोध, तेल प्रतिरोध र रंग फिल्म को इन्सुलेशन धेरै सुधार गर्न सकिन्छ; निर्माण सुविधाजनक छ, र यो ब्रश गर्न सकिन्छ, स्प्रे, डुबेको, आदि।
Alkyd रंग alkyd तामचीनी, alkyd मिश्रण रंग, alkyd विरोधी जंग रंग, alkyd प्राइमर, alkyd topcoat र यति मा विभाजित गर्न सकिन्छ। कोटिंग को व्यापक रूप मा सतह को सजावट र इस्पात उपकरण र इस्पात संरचनाहरु को रूप मा बाहिरी लेख को संरक्षण मा प्रयोग गरीन्छ, साथ साथै रसायन, पेट्रोलियम, जहाज निर्माण, पुल, विरोधी जंग पाइपलाइन, मशीनरी, राष्ट्रिय रक्षा र अन्य को विरोधी जंग कोटिंग उत्पादनहरु।
ग्रे इस्पात संरचना विशेष Topcoat
ग्रे इस्पात संरचना विशेष topcoat राम्रो चमक र रंग प्रतिधारण, कोटिंग फिल्म छिटो सुखाने, उच्च कोटिंग दर, बलियो लुकाउने शक्ति, सामान्य उद्योग को लागी उपयुक्त छ, कास्ट आयरन, इस्पात संरचना सतह कोटिंग छ।
अतिरिक्त सेतो चाँदी पाउडर रंग
अतिरिक्त सेतो चाँदी पाउडर रंग हल्का गन्ध र छिटो सुखाने गति संग, चाँदी पाउडर रंग, विलायक, एल्युमिनियम चाँदी पेस्ट र additives, को लागी विशेष राल बाट बनेको छ।
Alkyd वार्निश alkyd राल, सुख्खा र सम्बन्धित विलायक बाट बनेको छ, कोटिंग को सतह मा लेपित गर्न सकिन्छ, एक नमी प्रूफ प्रभाव खेल्छ।
Alkyd विरोधी जंग पेन्ट
Alkyd विरोधी जंग रंग सुखाने, रंग pigments, विरोधी जंग सामाग्री, विलायक, आदि को एक संयोजन हो, जो सीधा जंग, जंग मुक्त, हार्ड अक्साइड छाला र पुरानो रंग फिल्म संग स्टील को सतह मा लागू गर्न सकिन्छ।
Alkyd ब्लेन्ड पेन्ट
Alkyd मिश्रण रंग alkyd राल, pigments, विस्तारक pigments, driers र विलायक, आदि बाट प्रशोधन गरीन्छ यो राम्रो रंग छ र एक बाहिरी फिनिश को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Alkyd तामचीनी एक रंग कोटिंग alkyd राल, pigments, additives, विलायक, आदि पीस र मिश्रण पछि बनेको छ। यो राम्रो चमक र भौतिक र यांत्रिक गुणहरु छ।
चीन मा एक पेशेवर Alkyd रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ Alkyd रंग। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक Alkyd रंग लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।